Home Wararka Maxaa kala qabsaday Rooble iyo Wasiirada taageersanaa Farmaajo?
[XOG] Maxaa kala qabsaday Rooble iyo Wasiirada taageersanaa Farmaajo?
Wasiiradii taageersanaa Farmaajo oo la filayay inay shirka hadlaan ayaa qaaday tallaabo lama filaan ahayd markii aay ka gaabsadeen inay shirka ka hadlaan ama Ra’iisal wasaaraha hadal kusoo celiyaan.
Previous articleGolaha Wasiirada oo shalay ansaxiyay xisaab-xir ayan aqrin, kana doodin? Yaab
Next article[Abaabulka] Dibad baxyo ballaaran oo looga soo horjeedo Farmaajo oo Muqdisho ka dhacaya
Dilalka Iyo Dhaca Hubeysan oo ku soo badanaya Xamar.
Rooble oo Qarka u saaran inuu xilalka ka qaado Wasiiro kale